Shotcut 21.05 inosvika ine mafirita matsva, kugadzirisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni ye Shotcut 21.05 iyo iri kuvandudzwa nemunyori weprojekti yeMLT uye inoshandisa chimiro ichi kuronga kugadzirisa vhidhiyo.
Pakati pezvinhu zveShotcut, tinogona kusimbisa mukana we multitrack kugadzirisa pamwe nekuumbwa kwevhidhiyo kubva kuzvidimbu mumafomati akasiyana siyana, pasina chikonzero chekutora kana kudzikamisa ivo kutanga.
Iko kune zvakare kwakavakirwa-mukati maturusi ekugadzira screencast, kugadzirisa mifananidzo kubva kune webcam kamera, uye kugamuchira vhidhiyo kutenderera. Qt5 inoshandiswa kuvaka iyo interface.
1 Nhau huru dze Shotcut 21.05
2 Maitiro ekuisa Shotcut paLinux?
Nhau huru dze Shotcut 21.05
Mune iyi vhezheni itsva iyo akawedzera rutsigiro rwenguva Remap mafirita (Mafirita> Nguva> Nguva Remap> Keyframes), ndeipi bvumira kuti uchinje kumhanya kwekufamba kwenguva muvhidhiyo kumhanyisa, kudzora pasi kana kudzoreredza kutamba.
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti kuitiswa nenguva Remap cyakachinja iyo fomati fomati yeprojekti: mapurojekiti akagadzirwa muShotcut 21.05 haigone kutakurwa zvakananga mushanduro dzekarekunze kwekushandurwa 21.02 uye 21.03, kwaunogona kushandisa chirongwa chekupora basa, icho chinobvisa mafirita eInguva Remap.
Imwe shanduko yakaitwa yaive mubhokisi rebhokisi "Chinja kugadzirisa", yakawedzera imwe sarudzo yekushandisa chikamu chechidimbu, kana ichigoneswa, chikamu chechidimbu chete ndicho chinoshandurwa, icho chinotora masekondi gumi nemashanu pamberi nepashure pesarudzo. Zvakare akawedzera "Ramba Uchifambira Mberi" sarudzo yekuchengetedza masetingi pakati pezvikamu.
Mune iyo "Faira> Export furemu" fomu, kurudziro yekusarudza zita refaira inoitwa uye fomati yakashandiswa kare inorangarirwa.
Vaka rutsigiro rwakawedzerwa kumidziyo inoenderana neApple Silicon ARM (M1) chip.
Paunenge uchitsvaga zita mumakiyi akakosha, sarudzo yakurudzirwa kuti ichengetedze yakatwasuka zoom mukati memiganhu yakatarwa.
Wakawedzera mazano epfupi ayo anogona kushandiswa kana uchifambisa mafirama.
Yakagadziridzwa mhando yeinzwi nekusarudza iwo mwero wekuripa kwetoni
Dzakashandurwa shanduro dzeFFmpeg 4.3.2, Rubberband 1.9.1 uye MLT 7.0.0.
Yakagadziridzwa kurongeka kwemavara kana uchitarisa mavhidhiyo
Yakaderedzwa ndangariro yekushandisa nekushandura odhiyo sampuro chiyero.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kubvunza iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Shotcut paLinux?
Kuti ugone kumisikidza ino vhidhiyo mupepeti mune chero akasiyana akasiyana Linux kugoverwa, zvinodikanwa kutevedzera inotevera mirairo.
Panyaya yeavo vari Vashandisi veUbuntu uye zvigadzirwa zvaro, Iwe unogona kuisa ichi chishandiso nekuwedzera iyo yekushandisa repository kune yako system. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuvhura terminal neCtrl + Alt + T uye mairi tichaita zvinotevera.
Kutanga isu tichaenda wedzera iyo repository ne:
Ipapo isu tinogadziridza runyorwa rwemapakeji uye zvinyorwa nemutemo uyu:
Finalmente isu tinoenderera mberi nekuisa iko kunyorera ne:
Uye ndizvozvo, ichave yakaiswa muhurongwa.
Kune mamwe ese maLinux kugoverwa Tine nzira nhatu dzekuwana iyi application.
Yokutanga ndeye kushandisa flatpack, saka ivo vanofanirwa kuve nerutsigiro rwemhando iyi yekushandisa pane yako system.
Ipapo vanofanirwa vhura terminal uye mairi nyora unotevera kuraira:
Uye vakagadzirira nayo ivo vatove vakaisa iyi application.
Imwe nzira yatinofanirwa kuwana uyu mupepeti ndeye kurodha pasi application muchimiro chayo AppImage, iyo inotipa iyo nzvimbo yekushandisa iyi application pasina kuisa kana kuwedzera zvinhu kuhurongwa.
Kuti uite izvi, ingovhura imwe uye mairi ita unotevera kuraira:
Waita izvi izvozvi isu tinofanirwa kupa mvumo yekuuraya kune yakadzingwa faira na:
Uye pakupedzisira isu tinogona kumhanyisa iko kunyorera neinotevera kuraira:
Maitiro ekupedzisira ari nerubatsiro rwemapakeji Snap uye kuisa iyo application tinofanirwa kuita unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Shotcut 21.05 inosvika ine mafirita matsva, kugadzirisa uye nezvimwe
Philippenko Sergeï akadaro
Tout d'abord merci kudurura chinyorwa.
I toutefois idambudziko. In effet, après avoir essayé toutes les méthodes décrites, il semblerait that linux ne "trouve" pas shotcut dans le tableau de commande de mon chromebook.
Peut-n'ê-il plus inowanikwa?
Auriez vous une idee car je l'avais installé avec succès il ya quelques mois (et je l'ai deinstallé affin d'avoir la dernière version).
Pindura kuna Philippenko Sergeï
Gadziridza bhurawuza rako kuenda kuFirefox 88.0.1 dai waive uine matambudziko nezvakachengetedzwa zvemukati